A mara ọkwa Moto E7 Power na Helio G25 na 5.000 mAh batrị | Gam akporosis
A mara ọkwa Moto E7 Power na Helio G25 na 5.000 mAh batrị
Motorola na-akpọsa ngwaọrụ ọhụrụ, naanị mgbe ụbọchị ole na ole gara aga gosipụtara ndị ọhụrụ na ọha mmadụ Moto G10 na Moto G30. Emeputa na-ewepụta Moto E7 Power, ọnụ na na-adịbeghị anya leaked na nke ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ mara.
The Moto E7 Ike bụ ọgbọ nnọchi nke Moto E7, na-eto eto na batrị, ọ naghị eme ya na igwefoto bụ isi ma ga - apụta ihe niile maka ọnụahịa ọ ga - abata. Ihe omuma ohuru a bu ntinye aka na ntinye ntinye, maka ndi choro mkpanaka maka ihe ndi ozo ma nwekwaa obodo ha ihe dika ubochi abuo.
1 Moto E7 Ike, ihe niile gbasara ama ọhụụ
2 Batrị ga-ewe ihe karịrị otu ụbọchị ọrụ
Moto E7 Ike, ihe niile gbasara ama ọhụụ
Ngwaọrụ ọhụrụ abịa na a 6,5-anụ ọhịa Max Max ihuenyo na HD + mkpebi -
Wụnye MediaTek Helio G25 processorN'agbanyeghị na ọ bụghị otu n'ime ihe kachasị ike, ọ na-arụ ọrụ nke ọma ka batrị ahụ dị ogologo oge, na-abịarute ya na mgbawa ọzọ, ya na IMG PowerVR GE8320 GPU na-esonyere ya. E nwere nsụgharị abụọ, otu nwere 2 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa, ebe nke ọzọ bụ 4/64 GB, ha abụọ nwere ohere ịgbasa ROM na MicroSD.
Moto E7 Ike agaghị egwu nnukwu ihe mmetụta dị n'azụ, nke bụ isi bụ 13 megapixels, ebe ihe mmetụta 2 megapixel na-akwado ya. Ugbua n'ihu ya na-egosi ọkwa nke otu ntapụ mmiri nke o webatara a pụtara isi larịị 5 megapixel sensọ.
Batrị ga-ewe ihe karịrị otu ụbọchị ọrụ
Motorola gosipụtara na ekwentị ga-adịgide ihe karịrị otu ụbọchị na ojiji nkịtị, batrị gụnyere dị ka ọkọlọtọ bụ 5.000 mAh nke ga-erite uru site na iji mgbawa Helio G25. Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara na Moto E7 Ike Ọ bụ otu n'ime smartphones na mbido iru ahịa mechiri emechi wee nye ndị ọzọ ohere.
Moto E7 Ike ga-akwụ ụgwọ site na USB-C jiri ọkọlọtọ 10W buru ibu, zuru ike iji kwado ya kpamkpam n'ime ihe dị ka elekere na ọkara. O nwere chaja etinyere n'ime igbe ụda ọcha na naanị ihe na-efu bụ ikpe silicone iji kpuchido ngwaọrụ ahụ.
Ugbua na isiokwu nke njikọta ya nke ọma, ọ bụ Dual 4G mobile, iche bụ Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, 3,5 mm jackphone, GPS na ọ bụ Dual SIM. Akara mkpisiaka agụ ga-ike na azụ dị ka ọ na-eme na ndị ọzọ ụdị nke usoro, nri leta “M”.
Sistemụ arụmọrụ bụ gam akporo 10 yana Motorola nke aka ya, ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ MyUx, ọ bụrụ otu a, ọ na-ekwe nkwa ọsọ nke igbu ekwentị. Ọ na-abịa na mmelite kachasị ọhụrụ ugbu a ma na-ekwe nkwa imelite gam akporo 11 na ọnwa ndị na-abịanụ ka ị nọrọ n'ime atụmatụ nke Motorola.
MOTO E7 IKE
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD Max Vision na HD + mkpebi (1.600 x 720 pikselụ) / ruru: 20: 9 / Ume ume nke 60 Hz
Nhazi MediaTek Helio G25
Kaadị grafik Ihe ngosi IMG PowerVR GE8320
Nchekwa n'ime 32/64 GB / Nwere oghere MicroSD ruo 1 TB
Gbanwee CAMERA 13 megapixel isi ihe mmetụta / 2 MP macro sensor
UMUAKA 5.000 mAh na ibu 10W
Njikọ 4G / WiFi 4 / Bluetooth 5.0 / GPS / USB-C / Isi okwu Jack / Dual SIM
NDỊ ọzọ Rear mkpisiaka agụ / IP52 asambodo
Mbibi na ibu ibu 165.06 x 75.86 x 9.20 mm / 200 gram
El Moto E7 Ike batara na nhọrọ agba abụọ pụrụ iche, na-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie na ụdị abụọ nke RAM na nchekwa. A na-ere 7/2 GB Moto E32 Power nlereanya na Rs 7.499 (€ 85), ebe nke 4 / 64GB nke kachasị elu dị ọnụ na Rs 8.299 (€ 95 ọnụego mgbanwe).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » A mara ọkwa Moto E7 Power na Helio G25 na 5.000 mAh batrị
Ihe ndị a bụ akụkọ banyere nzukọ Google for 2021
Wulite obodo gi site na ijiko onu ogugu na Hello Town 2048